Lioka 3 - Ny Baiboly
Lioka toko 3
Ny toritenin'i Joany Batista - Ny nananarany ny vahoaka sy ny poblikàna ary ny miaramila - Ny nanambarany an'i Jesoa-Kristy - Ny nanaovan'i Joany batemy an'i Jesoa - Ny razan'i Jesoa-Kristy.
1Tamin'ny taona fahadimy ambin'ny folon'ny nanjakan'i Tibera Sezara, fony Pontsy Pilaty no governora tany Jodea, Heroda no tetrarka tany Galilea, Filipo rahalahiny no tetrarka tany Abilena, 2ary Ana sy Kaifa no lehiben'ny mpisorona, dia tonga tamin'i Joany zanak'i Zakaria tany an'efitra ny tenin'Andriamanitra. 3Dia nankany amin'ny tany rehetra amoron'i Jordany izy, nitory batemim-pibebahana ho famelan-keloka, 4araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny tenin'Izaia mpaminany hoe: Re ny feon'ilay miantso any an'efitra hoe: Amboary ny làlan'ny Tompo, ahitsio ny halehany; 5ny lohasaha rehetra hototofana, ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra haetry, ny melomeloka hahitsy, ary ny làlana mikitoantoana hohamarinina, 6dia hahita ny famonjen'Andriamanitra ny nofo rehetra.
7Ary hoy izy tamin'ireo vahoaka be nidodododo hataony batemy: Ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny hatezerana ho avy? 8Manaova asa mendrika vokatry ny fibebahana, ary aza manao anakampo hoe: Abrahama no rainay; fa lazaiko marina aminareo fa azon'Andriamanitra atao ny manangana zanaka ho an'i Abrahama na dia amin'ireto vato ireto aza. 9Efa mby eo am-poto-kazo sahady ny famaky; koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo. 10Ary hoy ny vahoaka nanontany azy: Inona àry no hataonay? 11Dia namaly izy ka nanao hoe: Izay manana akanjo roa dia aoka hanome ny tsy manana; ary izay manan-kanina dia aoka hanao toy izany koa.
12Ary nisy poblikàna nanatona hataony batemy koa, ka nanao taminy hoe: Inona no hataonay, ry mpampianatra ô? 13Dia hoy izy taminy: Aza mampandoa mihoatra noho izay nasaina halainareo. 14Ary nisy miaramila koa nanontany azy hoe: Ary izahay kosa, inona no mba tokony hataonay? Dia hoy ny navaliny azy: Fadio ny fanaovana an-keriny sy ny fitorohana, ary mahaiza mianina amin'izay karamanareo.
15Ary raha mbola niandry ny olona, sy samy nisaina tao am-pony fa Joany angaha no Kristy, 16dia niteny Joany ka nanao tamin'izy rehetra hoe: Izaho manao batemy anareo amin'ny rano, fa avy ilay mahery noho izaho, ary tsy mendrika hamaha ny fehin-kapany akory aho: izy no hanao batemy anareo amin'ny Fanahy Masina sy ny afo; 17eny an-tànany ny fikororohany ary hodioviny ny famoloany, ka ny vary hangoniny ao an-tsompitra, fa ny mololo kosa hodorany any amin'ny afo tsy mety maty. 18Fananarana maro hafa koa no nentiny nitory ny Evanjely tamin'ny olona; 19fa Heroda tetrarka, izay nanariny noho ny amin'i Herodiada vadin-drahalahiny sy noho ny ratsy rehetra nataony, 20dia nanampy heloka indray ka nanidy an'i Joany tao an-tranomaizina.
21Tamin'ilay natao batemy iny ny vahoaka rehetra dia natao batemy koa Jesoa, ka raha mbola nivavaka izy dia nisokatra ny lanitra; 22ary nidina teo amboniny ny Fanahy Masina naka endri-batana toy ny an'ny voromailala, dia nisy feo re avy any an-danitra nanao hoe: Hianao no Zanako malalako, hianao no ankasitrahako indrindra.
23Tokony ho telopolo taona Jesoa tamin'izy nanomboka nitory ny Evanjely, dia nataon'ny olona ho zanak'i Josefa izay zanak'i Hely, zanak'i Matata, 24zanak'i Levì, zanak'i Melkì, sanak'i Janè, zanak'i Josefa, 25zanak'i Matatiasa, zanak'i Amosa, zanak'i Nahoma, zanak'i Hesly, zanak'i Nagè, 26zanak'i Mahata, zanak'i Matatiasa, zanak'i Semeì, zanak'i Joseka, zanak'i Jodà, 27zanak'i Joanàna, zanak'i Rezà, zanak'i Zorobabela, zanak'i Salatiela, zanak'i Nerì 28zanak'i Melkì, zanak'i Adì, zanak'i Kosama, zanak'i Elimadama, zanak'i Hera, 29zanak'i Jesoasa, zanak'i Eliezera, zanak'i Jorima, zanak'i Matata, zanak'i Levì, 30zanak'i Simeona, zanak'i Jodà, zanak'i Josefa, zanak'i Jonàna, zanak'i Eliakima, 31zanak'i Meleà, zanak'i Menà, zanak'i Matatà, zanak'i Natàna, zanak'i Davida, 32zanak'i Jesè, zanak'i Obeda, zanak'i Booza, zanak'i Salmona, zanak'i Naasona, 33zanak'i Aminadaba, zanak'i Arama, zanak'i Esròna, zanak'i Faresa, zanak'i Jodà, 34zanak'i Jakoba, zanak'Isaaka, zanak'i Abrahama, zanak'i Tarè, zanak'i Nakora, 35zanak'i Saroga, zanak'i Reo, zanak'i Falega, zanak'i Hebera, zanak'i Salè, 36zanak'i Kainàna, zanak'i Arfaksada, zanak'i Sema, zanak'i Noe, zanak'i Lameka, 37zanak'i Matosalè, zanak'i Enoka, zanak'i Jareda, zanak'i Malaleela, zanak'i Kainàna, 38zanak'i Enosa, zanak'i Seta, zanak'i Adama, zanak'Andriamanitra. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0822 seconds